Momba anay - Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.naorina tamin'ny 2002, izay fantatra taloha ho toy ny atrikasa tanana, tanana amin'ny fonon-tànana hoditra sy fonon-koditra vita amin'ny hoditra, satroka ary kojakoja hafa ho an'ny mpivarotra iraisam-pirenena. Nanomboka ny taona 2012, nanova ny orinasanay ho amin'ny famolavolana sy fivarotana ho an'ny mpanjifa vahiny izahay. Nanambola tao amin'ny orinasa iray hamokarana vokatra hoditra sy volom-borona ao an-tanànan'i Gucheng, faritanin'i Hebei.
Eo ambanin'ny filozofia famolavolana ny "fahatsorana & fahamendrehana", ny orinasanay dia namolavola fonon-tanana vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra, fonon-tànana hoditr'ondry, satroka, fonon-tsofina ary vokatra hafa. Ny vokatra naondrana tany Eropa Andrefana, Etazonia, Kanada, Rosia, Japon, sns. Indrindra indrindra, ny fomba tsotra, ny kanto vita amin'ny asa tanana, ary ny hoditra vita amin'ny tànana dia raisin'ireo mpiantsena voditongotra vahiny tsara volo. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa mpamolavola antsika dia nanangona traikefa amin'ny famolavolana traikefa.
Hatramin'ny niorenany, ny orinasanay dia mandray am-pahamarinana, mandresy hatrany amin'ny tanjon'ny orinasa, manaraka ny fomba fanao amin'ny varotra iraisam-pirenena, manaraka ny lalàna mifehy ny varotra iraisam-pirenena, manangana rafitra QC henjana ary rafitra serivisy tonga lafatra. Ankehitriny izahay dia nanangana fiaraha-miasa maharitra sy maharitra amin'ireo mpaninjara anatiny sy avy any ivelany ary mpivarotra.
Manana ekipa vehivavy mahay tanana ihany koa izahay, ny fonon-tànantsika hoditr'ondry rehetra dia natsangan'ny tànana asa tanana vita amin'ny fanjairana isaky ny zaitra .ary tsy maintsy vitan'ny mpanao asa tanana mahay manana traikefa mihoatra ny 10 taona, ary koa ho an'ny fonon-tànana vita amin'ny hoditra na hoditr'ondry ihany. manana ekipa vita tanana toy izao izahay!
Izahay dia mandray ny mpanjifanay amin'ny fomba itiavan'ireo mpanjifa azy, miaraka amina serivisy manokana, fifanakalozana sy fiverenana tsy misy olana, ary vokatra ihany no avelanay ho afa-po ny mpanjifa.
Tongasoa eto hifandray aminay, Hiezaka mafy izahay hanampy.